Dareenka Dadka - Daryeel Magazine
1. Mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso inti uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawaceysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin
2. Waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynaan rabin in aan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynaan rabin in aan dareeno. Aad bay daruuri u tahay inaanxushmayno dareenka dadka kale.
3. Qofna kaama dhigi karo inaad dareento liidnimo ama niyad-jab ilaa aad adigu u oggolaato
4. Mid ka mid ah dareenada ugu qoto dheer, ugu sareeya, ayna ka buuxdo kalgacal iyo farxad; Waa marki aad si qushuuc leh Salaada u tukanayso adigoo dareemaya inaad Alle hor taagan tahay, waa marki Hooyada ilmihi ay markaa dhashay ay laabta ku qabato, waa marki Aabaha ay gabadhiisa yar dhabtiisa hurdo ku qabato oo ku seexato, waa marki Saaxiibadaa ay kuu taageeraan sida qoyskaaga oo kale, Qoyskaaguna ay kuu taageeraan sida saaxiibadaa oo kale.
5. Jeclow ama ka tag Qalbi ku dhaawacay, balse marnaba adigu ha dhaawicin Qalbi ku jecel. Run waa loo ekaysiin karaa dhoola-cadeyn iyo qosol been ah, laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah.
6. Waxa Boon-bale iyo alaab Aduunka yaal si loogu dheelo, dad qaarkii waxay doortaan inay ku ciyaaraan dareenka dadka.
W/Q: Farah Cawaash Beeldaaje
Hababka Ugu Toosan Ee Dadka Loola Dhaqmo Psychology Dabeecadaha Dadka Wax ka Ogow! Psychology Dabeecadaha Dadka: Maxay Dadka Ku Neceb Ay Kuu Neceb Yihiin? Xikmadaha Dadka Wanaagsan
Madoonaysaa dadku in ay ku Qadariyaan kuna Jeclaadaan?
Dabcan qof weliba waxa uu jecel yahay dadku in ay qadariyaan oo ay jeclaadaan .hadaba …